Otu esi ejikọ ekwentị na onye nbipute | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | 14/09/2021 14:00 | android, Nkuzi
Ekwentị mkpanaaka aghọọla naanị ngwaọrụ elektrọnik nwere njikọ ịntanetị n'ọtụtụ ụlọ, ọtụtụ bụ ndị ọrụ anaghị eche echiche iji kọmputa gafere ihe dị mkpa, dịka maka bipụta akwụkwọ ọzọ.
Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị naanị na teknụzụ mepụtara na ngwaọrụ mkpanaka, mana ọ rutekwara ngwaọrụ ndị ọzọ dịka telivishọn, ọkà okwu, ndị na -ebi akwụkwọ na, n'ozuzu, ngwaọrụ elektrọn ọ bụla. N'isiokwu a, anyị ga -egosi gị otu esi ejikọ ekwentị na ngwa nbipute.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ịma, tupu ịmalite chọọ cables n'ịntanetị, bụ na anyị enweghị ike jikọọ ekwentị na ngwa nbipute dị ka a na -emekarị n'etiti kọmpụta na ngwa nbipute.
Android adịghị ka Windows, anaghị etinye ndị ọkwọ ụgbọala na -akpaghị aka nke ngwa nbipute anyị na -ejikọ. Anyị enweghị ike ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na ngwaọrụ ndị ọzọ, ọkachasị n'ihi na ha adịghị site na ndị nrụpụta ọ bụla.
Nanị ihe ngwọta anyị nwere bụ jikọọ ikuku, ya bụ, site na Wi-Fi ma ọ bụ bluetooth. N'ahịa, anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ebi akwụkwọ na-enye ndị na-ebi akwụkwọ njikọ Wi-Fi nke na-enye anyị ohere ibipụta ikuku na-enweghị njikọ anụ ahụ.
Emebere ndị na-ebi akwụkwọ Wi-Fi maka ndị chọrọ belata ọnụ ọgụgụ nke eriri na ngwaọrụ eletrọnịkị gị, ebe ọ bụ naanị na anyị ga -ejikọ ya na netwọk eletriki. Anyị nwere ike ịsị na ha dị ka ntọala chaja ikuku, karịa ma ọ bụ obere.
1 Nzọụkwụ mbụ n'iji Onye na-ebi akwụkwọ Wi-Fi
2 Otu esi ebipụta akwụkwọ site na iPhone
3 Otu esi ebipụta akwụkwọ site na gam akporo
4 Tinye njikọ Wi-Fi na ngwa nbipute
Nzọụkwụ mbụ n'iji Onye na-ebi akwụkwọ Wi-Fi
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime mgbe anyị zụtara ngwa nbipute Wi-Fi bụ jikọọ ya na netwọ Wi-Fi nke ụlọ anyị ma ọ bụ ebe ọrụ. Ụdị ngwa nbipute a anaghị emepụta netwọ Wi-Fi nke ndị ọrụ ga-ejikọrịrị iji bipụta, dịka ha na-eme na ngwaọrụ nchekwa na igwefoto ndị ọzọ nwere njikọ Wi-Fi.
Site na ijikọ na netwọk Wi-Fi nke ụlọ anyị ma ọ bụ ebe ọrụ, onye nbipute ahụ ga-abụ dị maka ngwaọrụ eletrọnịkị ọ bụla ejikọrọ n'otu netwọk ahụ.
N'ụzọ dị otú a, obosara nke onye nbipute Ọ ga -edo onwe ya n'okpuru ike nke mgbama anyị site na onye na -ahụ maka redio na ndị na -emegharị ya (ọ bụrụ na ejiri ya), ọ bụrụhaala na anyị nwere njikọ na rawụta anyị, anyị ga -enwe ike ibipụta ikuku na ama ma ọ bụ kọmpụta anyị.
para jikọọ ngwa nbipute na netwọ Wi-Fi anyị anyị nwere ike ime ya n'ụzọ abụọ dị iche iche:
Site na ihuenyo mmetụ ngwa nbipute, na -abanye Ntọala - Njikọ ikuku.
Ijikọ onye nbipute na kọmpụta yana wụnye ngwanrọ onye nrụpụta. N'oge usoro nhazi, a ga -egosi anyị nhọrọ iji mee ka njikọ ikuku nke ngwa nbipute ka ọ rụọ ọrụ na -enweghị eriri.
Ozugbo anyị haziri ngwa nbipute site na ngwanrọ nke onye nrụpụta ka ọ rụọ ọrụ na ikuku, anyị nwere ike kwụpụ ya na akụrụngwa kọmputa iji rụọ ọrụ na netwọ Wi-Fi anyị.
Otu esi ebipụta akwụkwọ site na iPhone
Tupu ibipụta akwụkwọ site na iPhone, anyị ekwesịghị ịgbakwunye ngwa nbipute na ngwaọrụ mkpanaka anyị. Oge ọ bụla anyị chọrọ ibipụta, ngwaọrụ anyị ga-achọ ndị na-ebi akwụkwọ anyị jikọtara na netwọ Wi-Fi anyị.
para bipụta akwụkwọ ma ọ bụ foto site na iPhone ma ọ bụ iPad, ozugbo anyị haziri ngwa nbipute Wi-Fi, anyị ga-emerịrị usoro m na-egosi gị n'okpuru:
Ihe mbụ anyị ga -eme bụ imepe akwụkwọ ma ọ bụ onyonyo nke anyị chọrọ ibipụta.
Ọ bụrụ na ọ bụ foto, pịa na bọtịnụ òkè, na akụ nwere akụkụ elu wee họrọ nhọrọ Bipute.
Ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ, anyị ga -enwerịrị faịlụ nhọrọ akwụkwọ ma chọọ nhọrọ iji bipụta.
Mgbe ịpị bọtịnụ mbipụta, a ga -egosipụta windo ọhụrụ ebe a ga -egosipụta aha ngwa nbipute na -akpaghị aka. Ọ bụrụ na egosighi ngwa nbipute ahụ, ọ naghị ejikọ na netwọ Wi-Fi.
N'ikpeazụ, anyị ga- họrọ ọnụọgụ nke mbipụta ihe anyị chọrọ ibipụta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibipụta na agba ma ọ bụ oji na ọcha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe nhọrọ karịa nke egosiri na iOS nwa afọ, anyị nwere ike iji ngwa Printer Pro site na Readdle, ngwa na -enye anyị ohere. gbanwee nha akwụkwọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ibipụta akụkụ nwere ihu abụọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdị mma mma...
Readdle Printer Pro dị na faịlụ Lite version, nwere oke nhọrọ na a na-akwụ ụgwọ mbipute na -enweghị oke.
Onye na -ebi akwụkwọ Pro Lite nke Readdle dere
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Readdle Technologies Limited
Otu esi ebipụta akwụkwọ site na gam akporo
N'adịghị ka iOS, tupu ibipụta akwụkwọ, anyị ga -etinyerịrị sọftụwia dabara na onye nrụpụta onye nbipute. Ozugbo etinyere ya, ngwa ga -adị na sistemụ maka ngwa niile.
Ozugbo anyị họpụtara onyonyo ma ọ bụ akwụkwọ nke anyị chọrọ ibipụta, pịa bọtịnụ nhọrọ ma họrọ nhọrọ Bipute.
Mgbe ahụ, n'elu, a ga -egosipụta nhọrọ Chekwa ka PDF. Pịa na nhọrọ a yana n'etiti nhọrọ egosiri anyị họrọ Tinye ngwa nbipute.
Android ga-amata onye rụpụtara ngwa nbipute ejikọtara na netwọ Wi-Fi anyị, ọ ga-enye anyị nnweta ozugbo na ngwa nke onye nrụpụta a dị na Storelọ Ahịa Play (n'ọnọdụ m ọ bụ ngwa nbipute HP).
Ozugbo anyị ebudatara ngwa nke onye nrụpụta, anyị ga -enwe ike bipụta akwụkwọ ma ọ bụ onyonyo anyị ozugbo na ngwa ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike ime ya site na akụkụ ọ bụla nke sistemụ.
N'ọnọdụ m, aghaghị m ịwụnye ngwa HP ọhụrụ iji gbakwunye ngwa nbipute (HP Smart). Ozugbo etinyere ngwa a ọzọ, mata ngwa nbipute na -akpaghị aka ma tinye ya na sistemụ.
N'ikpeazụ, anyị na -alaghachi na ngwa ebe anyị mepere akwụkwọ ma ọ bụ onyonyo anyị chọrọ ibipụta dị, na menu ndị nbipute niile, anyị pịa na anyị na -ahọrọ aha onye nbipute anyị rụnyere.
Tinye njikọ Wi-Fi na ngwa nbipute
Na Amazon anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka tọghata ngwa nbipute anyị na-enweghị njikọ Wi-Fi na ikukuAgbanyeghị, ọtụtụ na -achọ ka onye nbipute ahụ nwee ọdụ ụgbọ mmiri ethernet, ihe na -ebi akwụkwọ ole na ole bu n'uche maka onyinye ọha ọha, mana ọ bụghị maka ndị na -ebi akwụkwọ ezubere maka gburugburu ọkachamara.
Ngwọta kachasị mfe, dị ọnụ ala nke na-enye anyị nsonaazụ kacha mma bụ nke onye nrụpụta TP-LINK nyere. Onye nrụpụta a na -enye anyị USB 2.0 ebipụta ihe nkesa, ngwaọrụ nke na -atụgharị anyị gbakwunye njikọ Wi-Fi na ngwa nbipute ọ bụla.
Onye nkesa mbipụta TP-LINK TL-PS110U na-enye anyị ohere ime n'enweghị kọmputa mgbe anyị na-ebipụta na netwọk. Naanị anyị chọrọ jikọọ TL-PS110U na ngwa nbipute site na USB ma jikọọ ihe nkesa ebipụta na netwọk iji nwee ike ibipụta na kọmpụta ọ bụla na netwọk.
Es dakọtara na ọtụtụ ndị na -ebi akwụkwọ n'ahịa, na-etinye microprocessor na-agba oke ọsọ na ọdụ ụgbọ mmiri USB 2.0 ka arụ ọrụ ibipụta na-echeghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi ejikọ ekwentị na ngwa nbipute
Enweghị m ike bulite foto na Instagram: ọ na -aga n'ihu na -ebu, gịnị ka m ga -eme?
Otu esi agbanwe kaadị SIM na -enweghị data sitere na ekwentị mkpanaaka gị